Amabhokisi we-TV we-Linux aphezulu ayi-5 | Kusuka kuLinux
La ukwamukelwa kwethelevishini nge-satellite, futhi kuyindawo lapho Ukusatshalaliswa kwe-GNU / Linux bacwilisiwe, kube nokuthuthuka okuningana okwenziwe umphakathi wamahhala wesoftware, ukuze ama-decoder noma abamukelayo bandise ikhwalithi yabo futhi banikeze izinzuzo ezinkulu.
Umphakathi wamahhala uhlinzeke ngeFirmware, abashayeli, uhlu lweziteshi, amathuluzi okuthola iziphuphutheki phakathi kwabanye, hhayi ize, I-Linux Enigma 2 iba yi I-firmware esetshenziswe kakhulu kuma-decoder namuhla. Kepha kukhona nokwabelana ngama-emulators afana neCCCAM, OSCAM, SBOX, MGCAMD phakathi kwabanye.
Ngendlela efanayo kukhona ama-decoder ane-GNU / Linux, enezinzuzo eziphakeme kakhulu ezibenza babe ngamakhompiyutha akwazi ukubamba i-satellite TV, ngaphezu kokunikeza ukusebenza okufana ne: Xhuma nge-Wifi, urekhode kuma-disc angaphandle, i-multichannel, i-USB connection, ukusakaza okusakazwayo, phakathi kwabanye.
Ngaphezu kokusebenza okuhle kwe- abemukeli nge-Linux, sengeza inkululeko yokuyiguqula ngendlela esiyithandayo, ukuze sibe nomphakathi osekelayo, othuthukisa futhi athuthukise lawa mathuluzi futhi ngaphezu kwakho konke isiqinisekiso sokungaphelelwa isikhathi ngesikhathi esifushane.
Ngokwesipiliyoni sami ngingakubheka lokho phakathi Amabhokisi / ama-TV aphezulu ama-5 aphezulu nge-GNU / Linux sinakho:
1 Vu + Solo2
2 I-OpenBox X5
3 I-Vu + SOLO 4K ene-Enigma 2
4 I-Dreambox 500-S
5 Azbox ME
Idikhoda esebenza kahle kakhulu, inesisindo cishe esingu-1.42kg, enobukhulu obungu-5 × 28 cm, ifakwe irimothi, imbobo ye-HDMI, itheku le-SCART kanye namachweba we-USB 2.0. Intengo yayo elinganiselwa ku- $ 300
Inebanga lemvamisa elisuka ku-950-2150 MHz, iyahambisana namafomethi ahlukahlukene wevidiyo nezithombe, phakathi kwayo okuyi-MPEG2, MPEG4, JPG evelele phakathi kwabanye, ibuye ifake iDolby Digital.
Ngokuvamile, le-decoder enamandla ine:
2 DVB - S2 / H.264 Iziphuphutheki zeSathelayithi
2 Amakhadi Abaphathi kanye 1 PCMCIA Slot
Ama-USB ama-3 nekhadi lenethiwekhi le-10/100/1000 le-Gigabit
Imiphumela yevidiyo: I-HDMI, iScart neRCA
Ngingumnikazi we I-OpenBox X5, i-decoder ye-IKS elula kepha enamandla nekhwalithi engikhange. Iqiniso lokuthi linokusatshalaliswa okuzinzile kwe-GNU / Linux likuvumela ukuthi linikeze izinhlelo zokusebenza zewebhu, isidlali sewebhu esinokusebenza okuphezulu, ukuhambisana namavidiyo ahlukahlukene, amafomethi alalelwayo nezithombe, kanye nezithombe zekhwalithi ephezulu kanye nemisindo edlalayo.
El I-OpenBox X5 Kunginike inkululeko yokumisa, ukuthuthukisa nokwenza imisebenzi eyenziwa umphakathi, kufanele kuqashelwe ukuthi njengoba senginalo, angibanga nankinga ngokudlala ifayili, noma ngifomathi engingakwazanga kaningi ukukhiqiza kabusha kudeskithophu yami.
Ukuhlanganisa ne Youtube, GoogleMaps Futhi manje uB uyayenza ibukeke, futhi ngikwazile nokujabulela i-IPTV okuthi, yize ingathuthuka, yenze lokho okudingekayo.
Yize izici zayo zilula kancane uma uziqhathanisa namanye ama-decoder we-Linux, okwenza kube ngcono kakhulu yintengo yayo engabizi kakhulu esukela ku- $ 60, okuyisivumelwano sazo zonke izici ezinikezayo.
I-Vu + SOLO 4K ene-Enigma 2
I-VU + SOLO 4K ngokungangabazeki iyidekhodo engcono kakhulu etholakala emakethe, ngokuba isamukeli sokuqala sesethelayithi esingu-4K emakethe esiza ne-Enigma 2 firmware.
Ine-processor ye-ARM MIPS Dual Core 1500 Mhz, efaka ama-satellite amabili, futhi ivumela iDual S2 noma i-T2 / C2.HbbTV. Konke lokhu kusho ukuthi iVu + SOLO 4k ingakwazi ukukhiqiza izithombe ezinokuxazululwa kuze kufike ku-4K, i-Ultra HD ne-3D.
Ngaphezu kwalokhu, iVu + SOLO 4K ifakwe i-2Gb ye-RAM, amachweba we-USB 3.0, i-HDMI 2.0, iGigabit. Ngokuvamile, izici zale decoder yilezi:
I-PVR, ivumela ukurekhoda
2,5 ″ SATA Hard Drive (ayifakiwe)
Khombisa 3.5. Izinhlamvu eziyi-12 VFD
Ongakukhetha: I-WiFi n 300Mbps
Isekela i-4K ne-3D
El I-Dreambox 500-S, ingumamukeli osebenza nesoftware yomthombo ovulekile, inezinhlelo zokusebenza eziningi ezifakwe ngaphambilini, ukusekelwa komphakathi omkhulu kakhulu wabathuthukisi kanye nekhono lokwenza ngezifiso ngokugcwele.
Le khompyutha enamandla ine-processor engu-400 MHz, engu-256 MB ye- RAM , Umhlahlandlela we-EPG we-elekthronikhi futhi usekela ukurekhodwa kwevidiyo nge-IP kanye nokuxhumeka kwe-Wi-Fi ne-ethernet, futhi kuvumela ukurekhodwa okuqondile kumadiski angaphandle
Kubalulekile ukuthi wazi ukuthi i-Dreambox ivumela: uhlu olungenamkhawulo lwethelevishini nomsakazo, ukushintsha iziteshi kuzothatha isikhathi esingaphansi kwesekhondi. Ngokunjalo, ikuvumela ukuthi ushintshe okokufaka kwe-Low Noise Multiple Block (LNB) receiver, ukuthola uhlelo kusuka kumasathelayithi ahlukahlukene.
Angikaze ngithinte kakhulu Azbox ME, kodwa ngimangele ngokuzinza kwayo, kuyimodeli esetshenziswa kakhulu eLatin America.
El Azbox ME Ivela efektri enezithombe ezi-2 ze-GNU / Linux, kepha ingaphatha kuze kufike ku-3 lapho kufakwa khona i-Android ne-Aztrino, inomphathi wokuqalisa lapho ukhetha khona i-OS ozoqala ngayo.
Isekela ama-antenna amaningi, ine-heatsink futhi ishintshele izithombe eziphuthumayo.
Le khithi ifaka phakathi i- yakamuva Sombhalo Sombhalo, ibucayi kakhulu futhi ngayo singakhetha izinketho ezintathu zokwamukela i-TV: Isatellite, I-TDA o Cable. Futhi inechweba le-eSATA lokuxhuma kwimishini yangaphandle, ukusebenzisana okubanzi namafomethi e-multimedia ahlukahlukene nokusebenza okwamukelekayo.
Ukuphetha, Akunandaba ukuthi i-decoder / receiver ene-GNU / Linux oyithengayo, kufanele ukhumbule ukuthi uzoba nenkululeko enkulu yokwenza ngokwezifiso zakho, ngaphezu kokuba nethuba lokuthola okuningi kwi-hardware.
Ikakhulu, ngicabanga ukuthi ama-decoder ane-GNU / Linux adlula kakhulu amaningi ane-OS ephathelene, ikakhulukazi endaweni yezibuyekezo. Iyiphi i-decoder ene-Linux oyithandayo?
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » Amabhokisi we-TV aphezulu ama-5 ane-Linux
Ngabe ziyahambisana kuphela neYurophu noma ngabe zijwayelekile, njenge-ISDB-T? Labo abane-usb, ungafaka idiski yangaphandle ukurekhoda?
I-PS: I-DTT iyefana nekhebula, ngicabanga ukuthi ubuqonde i-TDA
Zinokujwayelekile, yize ezinye ziza neziphuphutheki kuphela eYurophu zingabuyekezwa futhi zilungiswe, lezo ezine-USB zingagcina ezinkumbulweni zalolu hlobo futhi eziningi zinechweba le-Esata lamadiski angaphandle e-sata. Empeleni, bengibhekisa ku-TDA ilungisiwe
UMiguel Mayol Tur kusho
Nge-fiber optic (i-ethernet evela kurutha) ...
Inethiwekhi yami ibona i-PVR yeMovistar Spain njengeLinux 2.6 (ishumekiwe), ne-KODI kungaba ku-Android noma ku-GNU / Linux ngama-plugins angenza i-PVR futhi ifunde uhlu lwe-m3u neziteshi ze-opharetha yakho (eyokugcina izinze kakhudlwana).
Phendula uMiguel Mayol Tur
i-azbox ishone njengomkhiqizo kwazise ibikade isetshenziswa njenge-SKS ne-IKS amaphoyisa abamba amaseva futhi inkampani yayeka ukukhiqiza imishini ukuze imishini icishe noma iguqulwe ibe eminye imishini esebenza njengamanje, imishini ye-azbox okungcono kakhulu okufike eningizimu nemelika ikhwalithi yamandla wezinto ezinhle phakathi kwezinye izinto
UFermín Barboza kusho
Sawubona, ngivela e-Uruguay, iyiphi oyincomayo?
Ngiyingxenye yeLinuxPay (iqembu labasebenzisi be-GNU / Linux lasePaysandú, e-Uruguay)
Kusukela vele ngiyabonga kakhulu.
Phendula uFermín Barboza
Isebenza kanjani? Imali ikhokhwa kubani?
Ngisanda kuthenga i-VU + receiver 4k kuphela, futhi ingcono kakhulu kuneDreambox 500hd yami endala, isithombe esingcono, isivinini ekushintsheni iziteshi nokusebenza, ngiyakuncoma
URodrigo Figueroa Lopez kusho
Sawubona mngani… ikusebenzela kuphi… eLatin America?
Ngivela eChile… futhi ngifuna iVuplus 2 se
Phendula uRodrigo Figueroa López
Sawubona, uvela kuliphi izwe .... Ngifuna ukuthenga i-vu +, kodwa ngidinga ukuthi bengikade nginjani eLatin America
Luigys, i-athikili enhle kakhulu, ngenza ukuqhathanisa ukuthenga futhi nginentshisekelo ngeQviart One. Ngingathanda ukwazi umbono wakho. noma uma umngane wakho eyisebenzisile, ngiyabonga kusuka ePanama.
Ungaba kanjani nesiphakeli sakho sekhasino esiku-inthanethi